Toddobaadka Haweenka ee BBC Somali - BBC News Somali
Image caption BBC SOMALI
Markii ugu horreysay, BBC Somali waxay marti galinaysaa doodo ku saabsan dumarka guud ahaan gobolka , taasi oo qayb ka ah toddobaad aan si gaar ah wax uga qori doono taasi oo lagu soo beegay maalinta caalamiga ah ee dumarka .
Barnaamijyadan gaarka ah oo aan uga hadlayno arrimaha dumarka ayaa billaaban doona 3 March ilaa 8 bishan march.
Macluumaadkan ayaa ku maqli doontaan, am ka daawan doontaan Telefishinka BBC Somali , Idaacadda iyo idinkoo sidoo kale ka daalacan kara barta aanu internetka ku leenahay ee BBCSomali.com.
Waxyaabaha aad barnaamijyadani aan idinku hayno wax ka mid ah dumarka iyo hoggaanka gayiga Soomaalida , sheekooyiin la xiriira haweenka Soomaalida ah ee ganacsatada ah oo ay ka mid tahay Aamina Xirsi),waxa aan sidoo kale eegi doonaa noolasha guurka ee dumarka Somaalida , sheeko ku saabsan isbataalka hooyada iyo dhallaanka iyo tacadiyada dhanaka galmadda ee haweenka.
Doodda guud ee haweenka ayaad maqli doonta maalinta ugu dambaysa oo ah jimcaha oo ay taariikhdu ku beegan tahay 8 March, waxaa doodan ka qayb gali doona haween leh meeqaam sare oo ka hadli doona tacadiyada ka dhanka ah haweenka.
Tafaftiraha BBC- laanta afka Soomaaliga, Cabdullahi Cabdi ayaa yiri " tani waa tusaale kale oo muujinaya sida aan u doonayno in Haweenka dhagaystayaasha ah aan siino ka qaybgalka heer aan horey loo arag.
Toddobaadka Haweenka ee BBC Somali waxa uu fursad noo siinayaa in aan yeelano dood wax ku ool ah oo ku saabsan guulaha haweenka iyo mowduucyo muhim ah sida tacadiyada ka dhanka ah haweenka " ayuu intaa ku daray.
Sii hayaha xilka maariyaha barnaamijka Qaramada Midoobay ee haweenka u qaabilsan Soomaaliya , Faadumo Dayib, oo ka qaybqaadan doonta doodda ayaa tiri: "waa markii iigu horreysay oo aan indhaha saaro hay;ad caalami ah oo warbaahineed sida BBC Soomali oo muujisay danayn wayn oo ku saabsan arrimaha Haweenka ee gobolka , oo in aad ka hadasho arrimahan oo kale ay u baahan tahay geesinimo iyo ka go'naashiyo."